कस्तो अचम्म! अस्पतालले मृ’त घोषणा गरेका ब्यक्तिको नर्भिकमा उपचार हुँदै – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कस्तो अचम्म! अस्पतालले मृ’त घोषणा गरेका ब्यक्तिको नर्भिकमा उपचार हुँदै
काठमाडौ । भक्तपुरमा रहेको एउटा अस्पतालले निधन भयो भनेर विदा दिएका एक जनालाई अहिले नर्भिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । भक्तपुरको इवामुरा अस्पतालले मृ त घोषणा गर्दै परिवारलाई जिम्मा दिएका एक जनालाई अहिले नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको छ । इन्डोस्कोपी गर्न गएका ४७ वर्षीय लक्ष्मीकुमार लाखाजुको अहिले नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु गरिएको छ । समाचार अनलाइनहरूमा छन् ।
जिवित ब्यक्तिलाई निधन भएको भन्दै विदा दिने अस्पताल विरुद्ध स्थानियबासीन्दा विरोधमा उत्रिएका छन् । लाखाजुको अहिले नर्भिक अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको आफन्तले जनाएका छन् । इवामुराले निधन भयो भनेपछि हामीले थप उपचार हुन्छ होला भनेर कराएपछि इवामुरा अस्पतालले नर्भिकमा लग्यो,’ विरामी लाखाजुका भाइ विजेस र छोरा नविनले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नर्भिमकले मुटुको धड्कन बाँकी नै रहेको भन्दै भेन्टिलेटरमा उपचार गरिरहेको छ।’
फर्निचरमा काम गर्दै आएका उनी हिँडेरै इन्डोस्कोपी गराउन अस्पताल पुगेका भएपनि अहिले गम्भिर अवस्थामा नर्भिकमा उपचार सुरु गरिएको छ । अस्पतालले लापर्वाही गरेको भन्दै आफन्त र स्थानीयहरु अहिले इवामुरा अस्पताल घेराउ गर्न पुगेका छन्।
जिपीका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि
दमौली, १५ असोज- तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना पुष्टि भएपछि सेवा बन्द गरिएको छ । उपचार केन्द्रको प्रयोगशालामा कार्यरत एक महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि आजदेखि सेवा बन्द गरिएको हो ।
उपचार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा रामकुमार श्रेष्ठले अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि केन्द्रबाट उपलब्ध हुने प्रशासनिक र आइसोलेसन बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती स्वास्थ्यकर्मीको कन्ट्याक्टमा आएका सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ । “अस्पतालका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी उहाँको सम्पर्कमा आउनुभएको छ, सबैको शुक्रबार स्वाब सङ्कलन गर्दैछौँ,” डा श्रेष्ठले भन्नुभयो, “पिसिआर रिपोर्ट आएपछि मात्रै सेवा खुल्छ ।”